Xusuusta 49-guuradii toogashadii Jen. Salaad Gabeyre Kadiye, Ceynanshe iyo Dheel | Hadalsame Media
Home Maqaallada Xusuusta 49-guuradii toogashadii Jen. Salaad Gabeyre Kadiye, Ceynanshe iyo Dheel
(Hadalsame) 04 Luulyo 2021 – Shalay oo kale, 3-dii Luulyo, 1972, abbaarahii 08:00 subaxnimo ayaa maanta oo kale ka soo wareegatay 49 sanno, dil murugo leh, si waxashnimo ahna loogu fuliyay General Salaad Gabeyre Kadiye, General Mohamed Aynanshe Guleid iyo Col. Abdulkadir Dheyl Abdulle.
Cali Muxiyaddiin Cali – Waxaad kala xiriiri kartaa Email: [email protected]
Previous articleMaxaa ka khalday Abid Ahmed? 3 uu furfuray, 3 lagu qoonsaday, 3 laga fasirtay & 3 uu ku fashilmay!
Next articleMasar oo ka fikiraysa inay tillaabo millateri ka qaaddo Itoobiy (Somalia oo ay ku tashanayso & caqabadaha hor taagan)